Fanatanjahantena : mbola baraingo ny hisokafan’ny kianja | NewsMada
Fanatanjahantena : mbola baraingo ny hisokafan’ny kianja
Efa ho iray volana izay, ny nikatonan’ny kianja rehetra eto an-dRenivohitra sy ny fiatoan’ny fifaninanana fanatanjahantena rehetra. Efa betsaka ireo ekipa tsy nanao fanazarantena intsony, satria tsy misy fihaonana atrehiny. Misy fiantraikany betsaka izany, na eo amin’ny klioba na eo amin’ny mpilalao.
Misy fihemorana ny tanjaky ny atleta satria tsy mikotrana intsony ry zalahy. Tsy manana vola intsony koa ny ekipa, satria mety efa lasa nanaovana zavatra hafa. Noho ny tsy fisian’ny fifaninanana, noho ny pesta manjakazaka eto amin’ny tanàna, ny anton’izany rehetra izany. Hatreto, mbola baraingo amin’ny rehetra ny fotoana mety hisokafan’ny kianja sy hiverenan’ny fifaninanana.
Miandry ny fanapahan-kevitry ny fanjakana ny tontolon’ny fanatanjahantena, izay efa manao antso vonjy mba hiakaran’izy ireo kianja amin’izay. Tsy afenina fa tsy vitsy ireo mivelona amin’ny fanaovana fanatanjahantena na tsy mbola matihanina tanteraka, toy ny any ampita, aza.